ကျောက်တော် ဆန်စက်ကို ဘင်္ဂါလီ တွေ မီးရှို့၊ ၃ ဦးသေ အများအပြား ဒဏ်ရာရ | The FNG
ကျောက်တော် ဆန်စက်ကို ဘင်္ဂါလီ တွေ မီးရှို့၊ ၃ ဦးသေ အများအပြား ဒဏ်ရာရ
August 6, 2012 · by 21 South News	· in (unnamed), News.	·
ရခိုင် ပြည်နယ် ၏ မြို့ တော် စစ်တွေ နှင့် မိုင် ၆၀ ခန့် သာ ဝေးသည့် ကျောက်တော် မြို့တွင် တနင်္ဂ
နွေ နေ့က မီးရှို့မှု နှင့် ခိုက် ရန် ဖြစ်ပွား မှု များ ကြောင့် လူ သုံးဦး သေဆုံး ခဲ့ ရပြီး အများ အပြား
ဒဏ်ရာ ရရှိ ခဲ့ သည် ဟု မြန်မာ အစိုးရ တာဝန် ရှိ သူ များ ယနေ့ တရားဝန် သတင်းထုတ် ပြန်သည်။
အဆို ပါ မငြိမ်သက် မှု သည် ဒုတိယ သမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက် ခမ်း ရခိုင် ပြည်နယ် တွင် ရောက်
ရှိ နေ ခြင်း ဖြစ် ပြီး စစ်တွေ တက္ကသိုလ် ပြန် ဖွင့် ရန် တစ်ရက် အလို တွင် ပေါ်ပေါက် လာခြင်း ဖြစ်
မည်သည့် အကြောင်း ကြောင့် မီးရှို့ မှု များ စတင် ဖြစ်ပွား ခဲ့ သည် ကို မသိရှိ ရသေး ဟု ဒေသခံ လုံ
ခြုံရေး ၀န်ထမ်း တစ်ဦး က AFP ကို ပြောသည်။
ကျောက် တော် ပြည့်သူ့ ဆေးရုံကြီး မှ ၀န်ထမ်းတစ်ဦး က ” ရွှေလှိုင် ရခိုင် ရွာ က ဆန်စက် မီးရှို့ ခံရ
တယ် ဆန်စက် က ဘင်္ဂါ လီ ရွာ ထဲ မှာ ရှိတာ မီးရှို့ပြီးတော့ ဘင်္ဂါ လီ တွေ က ဆန် တွေ ၀င်သယ်
ပြီး ထွက် ပြေး သွား ကြတယ်” ဟု FNG ကို ပြောသည်။
ရွှေလှိုင် ဘင်္ဂလီ ရွာ ၊ ဂုပ္ပီထောင် နှင့် အပယ်ဝ ရွာ များ တွင် လည်း ဘင်္ဂါ လီ များ ဒေသခံ များ ကို
နှောင့်ယှက် ရန် စခြင်း ရခိုင် နေ အိမ် များ ကို မီး ကွင်း ပစ် ခြင်း များ ရှိသည် ဟု သိရသည်။
ကျောက်တော် မြို့တွင် တနင်္လာ နေ့မနက် ပိုင်း တွင် လုံခြုံရေး တပ် ဖွဲ့ဝင် များ က မီးရှို့ သည့်
ဘင်္ဂါ လီ များ ကို လိုက်လံ ဖမ်းဆီးမှု ရှိ သော် လည်း ဒေသခံ ရခိုင်များ က ဘင်္ဂါလီ များ ထပ်မံ
လိုက်လံ မီး ရှို့ မည် ကို ကြောက် ရွံ့၍ တိမ်းရှောင် နေကြသည်။
ဆန်စက် မီးလောင်မှု နှင့် ဂုပ္ပီထောင် တွင် မီးရှို့ မှု များ ကြောင့် နေ အိမ် အလုံး ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်
ပျက် စီး ခဲ့ ပြီး သေဆုံး သူ ငါး ဦးခန့် ရှိ နိုင်သည် ဟု ဒေသခံ များ က ဆိုသည်။
ဇွန်လ အတွင်း က ဖြစ်ပွား ခဲ့ သည့် မငြိမ်သက် မှု များ ကြောင့် ရခိုင် ပြည်နယ် တွင် သေဆုံးသူ ၈၀
အထိ ရှိခဲ့ သည်။
ကျော်တော် မြို့မှာ ကဲ့ သို့ပင် ကျောက် ဖြူ မြို့ဉ် လည်း မီးရှို့ ရန် ကြံစည် မှုများ ရှိ ပြီး ဖမ်းဆီး ရမိ
ထား သည် ဟု သိရသည်။
ကျောက်တော် မြို့ နယ် တွင် တစ်ဖက် နိုင်ငံ မှ ၀င်ရောက် လာသည့် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာများ သည်
ဒေသခံ ရခိုင်တိုင်း ရင်းသားများ နှင့် အတူ နေ ထိုင် ကြသည်။
← ပိတ်ဆို့ မှုတွေ ဖယ်ရှားရေး အတွက် လော်ဘီ ကို စဉ်းစား တဲ့ မိုက်ကယ် မိုးမြင့်
ဝေဖန်မှု များ ပေါ်ထွက်လာ နိုင်သည့် လွှတ်တော် ကော်မတီ သစ် တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥက္ကဌ နေရာ ပါဝင် →
12 responses to “ကျောက်တော် ဆန်စက်ကို ဘင်္ဂါလီ တွေ မီးရှို့၊ ၃ ဦးသေ အများအပြား ဒဏ်ရာရ”
ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ် August 8, 2012 at 11:26 pm · ·
ရုးနေလား Rakhine……… ကချင်ပြည်နယ်မှာ ကချင်တစ်မျုိးတည်းနေသလား။ရှမ်းပြည်နယ်မှာကော ရှမ်းတစ်မျိုးတည်းနေသလား။အေး … မင်းတို့ရခိုင်တွေက ရခိုင်တစ်မျိုးတည်းနေချင်တယ်ဆိုတော့ ရခိုင်ခွဲထက်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။မင်းတို့ အကြံယုတ်တွေကို မင်းရဲ့မှတ်ချက်က ဖော်ပြနေတယ်။ငါအခုမှ သဘောပေါက်တော့တယ်။ ရခိုင်မှာ ပြသနာဖန်တီးနေတာတွေဟာ အစကတော့ ဘင်္ဂလီတွေလက်ချက်လို့ထင်နေတာ။အခုမှ မင်းတို့ရခိုင်တွေလက်ချက်ဖြစ်မှန်း သိလိုက်ရပြီ။ ပြည်ထောင်စုက ခွဲထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ မင်းတို့ရခိုင်တွေကို အပြတ်ချေမှုန်းမယ်
rakhine August 8, 2012 at 12:54 pm · ·
yes we runaway because of the burma government is arrest to rakhine.the government is afraid to bingali musilm.one day we must do only one rakhine live in rakhine land.rakhine land for rakhine nation.i promise.
tom cruise August 8, 2012 at 1:10 am · ·
this problem start from stupid bangalies, b-coz, kyauktaw bangali villages(peoples) more than rakhine peoples and military officer take care of all bagalies. immediately remove to they native country( bangaladesh,pakistan,turkey,……etc) under president control.
Union August 7, 2012 at 1:37 am · ·
ဆန်စက်က စာနာတတ်တဲ့ ရခိုင်က ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဆန်ရောင်းပေးတာကို ရခိုင်အစွန်းရောက်တွေက မရောင်းဖို့တားမြစ်တာ မလိုက်နာလို့ ရခိုင်အချင်းချင်းမီးရှို့ပြီး ရိုဟင်ဂျာကရှို့တယ်ဆိုပြီး သတင်းလွှင့်တာပါ။ နားလည်ထားဖို့က ရခိုင်အိမ်တော်တော်များများမှာ ရခိုင်အိမ်လို့ စာကပ်ထားကြတယ်။ဘာသဘောလဲ….ရိုဟင်ဂျာတွေမီးလာရှို့ရင် ရခိုင်အိမ်ကို အလွယ်တကူမြင်နိုင်အောင်ကြေညာထားတာလား…….လုံးဝမဟုတ်ပါ……..မီးရှို့သူတွေက ရခိုင်အစွန်းရောက်တွေဖြစ်နေလို့သာ ရခိုင်အချင်းချင်း မှားပြီးမရှို့မိအောင် ရခိုင်အိမ်လို့စာကပ်ထားတယ်ဆိုတာ ဦးဏှောက်ရှိတဲ့သူတိုင်း ထမင်းစားတဲ့သူတိုင်း စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကင်တားနားလာတုန်းသာ မီးရှို့တာတွေခဏရပ်ထားတာ..ပြန်လည်းပြန်ရော ရခိုင်အစွန်းရောက်တွေက မီးတန်းရှို့တော့တာပဲ။ သူတို့က ရှို့ပြီး ရိုဟင်ဂျာတွေကဘဲ မီးလိုက်ရှို့နေတဲ့ပုံစံ သတင်းလွှင့်နေတယ်။မီဒီယာအားကိုးနဲ့ မမှန်သတင်းတွေ သတင်းပြောင်းပြန်တွေ ရခိုင်အစွန်းရောက်တွေ ဖြန့်နေကြတယ်။
အင်အားကြီးတဲ့သူတွေက အင်အားမရှိတဲ့သူတွေအပေါ်မှာ နှိပ်ကွပ်မှုတွေမှာ တစ်ချိန်မှာ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမယ်ဆိုတာ မြဲမြဲမှတ်ထားပါ။၀ဋ်ဆိုတာ လည်တတ်တယ်။
ချိန်တန်ပြီ August 6, 2012 at 10:12 pm · ·
ကုလားထဲမှာတောင် အဲဒီ မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာနေတဲ့ ဘင်္ဂါင်္လီလူမျိုးလောက် အမျိုးယုတ်တာ မရှိတော့ဘူး … ရခိုင်တွေကလည်း မြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်းဆိုရင် သတ္တိတွေရှိသလောက် ကုလားနဲ့ဆိုရင် အမြီးကုတ်ပြီး ထွက်ပြေးနေကြတယ် … ငါသိခဲ့တဲ့ ရခိုင်တွေဆိုတာ ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူး…
ထ August 6, 2012 at 9:04 pm · ·
kolatt August 6, 2012 at 5:50 pm · ·
မီးရှို့မှုတွေလုပ်နေတာက ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေပါပဲ။ သေချာစုံစမ်းပြီး ဖော်ထုတ်ရင် သတင်းအမှန်သိရပါမယ်။
အားလုံးတဖက်စောင်းနင်းကြီးပဲ မဖော်ပြပါနဲ့။ အမှန်တရားကို အရှိတိုင်းဖော်ပြစေချင်တယ်။
Myanmar People August 6, 2012 at 5:01 pm · ·
ဒီလောက်ဆိုးသွမ်းနေရင် တိုင်းပြည်ထဲမှာ လုံးဝ နေထိုင်ခွင့် မပေးသင့်ဘူး . . ကိုယ့်လူမျိုးရခိုင်တွေအတွက်လဲ စိတ်ချရအောင် လူ့ အခွင့်အရေး ပေးဖို့ မတန်တဲ့ ဒီကုလားတွေအကုန်လုံးကို မောင်းထုတ်ပြစ်လိုက်ကွာ . . ကျူပင်ခုတ် ကျူငုတ်ပါမကျန်စေအောင်ကို ရှင်းပြစ် . .
့honey August 6, 2012 at 4:58 pm · ·
myozawzaw August 6, 2012 at 4:06 pm · ·
မေယုသွီး August 6, 2012 at 3:26 pm · ·
ချိန်တန်ပြီ August 6, 2012 at 10:10 pm · ·
ရခိုင်သားတွေ ကြောက်ပြီး ထွက်ပြေးနေကြတယ်လေ … သတင်းမှာတောင် ပါသေးတယ် … အဲဒါပဲ ရခိုင်သွေး ဘယ်လောက်ရဲတယ်ဆိုတာ … အဟတ် ဟတ်